Ruush oo laga rabo caawinta maxaabiista - BBC Somali
Ruush oo laga rabo caawinta maxaabiista
Image caption Kooxda taageersan Ruushka oo ku sugan meel u dhow halka ay ku xiran yihiin kormeerayaasha reer Yurub
Xoghayaha arimaha dibada ee Maraykanka John Kery waxaa uu ku-baaqay in Moscow ay samayso waxkaste oo lagusii daynkaro, kormeerayaashii Mulatariga ahaa ee Reer Yurub, kuwaas oo lagu afduubtay bariga Ukraine.
Isaga oo khadka taleefanka kula xidhiidhay wasiirka arimaha dibada ee Ruush-ka Mr Kerry waxaa uu sharaxay sida uu uga walaacsan yahay waxa uu ugu yeedhay daandaansiga dhaqdhaqaaqa ciidamada Ruush-ka ee xadka udhaw.
Sergi Lavrov waxaa uu sheegay in ay waajibtahay in Ukraine ay joojiso hawlgalka Mulatari ee ay kawado bariga dalka taasoo qayb kanoqonkara in dhibaatada la dajiyo.
Wakiilka Ruushka ee golaha Iskaashiya iyo amniga ee midowga Yurub, ayaa sheegay in xukuumadda Moscow ay ku dadaali doonto tallaabo kastoo macquul ah oo lagu xaqiijinayo in lagu siidaayo kormeerayaasha dhanka meleteriga ee lagu xiray bariga dalka Ukraine.
Sideed ka mid ah kormeerayaasha iyo shaqsiyaad kamid ah ciidamada Ukraine ayaa jimcihii ay xireen taageerayaasha Ruushka mar ay ku sugaayeen magaalada Sloviansk.
Wasiirka arimaha dibadda ee Jarmalka-- Frank-Walter Steinmeier – ayaa sheegay in golaha Iskaashiga iyo amniga ee Yurub, Ukraine iyo Ruushka intaba ay ballan qaadeen siideynta kooxda.
Maleeshiyada ayaa sheegtay in kooxda ay wax basaasayeen. Mid kamid ah hogaamiyayaasha gooni u goosadka oo isku magacaabay duqa Sloviansk, Vyacheslav Ponomarev – ayaa sheegay inay kooxda xiratay maxaabiista inay suurtagal tahay inay ku badashaan maxaabiis ay ka hayaan ciidamada Ukraine. Wuxuuna intaa raaciyay in xaaladdooda caafimaad lala socdo.<br/>
Waxa uu xaqiijiyay hogaamiyahaasi u hadlay kooxda gooni u goosadka ah ee Bariga Ukraine in su’aalo la weydiinayo kormeerayaasha iyo askarta la xiray.